Saldhigga Nomad Saldhigga Pro, waxa ay AirPower noqon karto oo aan waligeed ahayn | Wararka IPhone
Nomad waxay samaysay maalinta inbadan oo naga mid ah oo wali rajaynaya in Apple maalin uun naga yaabin doono saldhigeeda AirPower. Saldhiggaas "sixirka" ee ballanqaaday inuu ka qaadi doono aaladeenna meel kasta oo aan dhigno, iyadoon loo cabbiri karin meesha saxda ah ee milimitirka, ayay baajisay shirkadda Apple ka dib bilooyin ay sugaysay. wixii Apple awoodi kari weyday inay qabato Nomad ayaa gaadhay iyadoo saldhiggaaga Pro.
Saldhig runtii sameeya wixii saldhigga AirPower uusan sameyn: dusha sare oo aan dhigeyno illaa seddex qalab, oo leh jihada aan dooneyno, booska aan dooneyno, oo dib ayey u buuxin doonaan. Halka kuwa kale ay si fudud ugu daydeen naqshadda saldhigga AirPower, Saldhiggan Saldhigga Pro wuxuu diiradda saarayaa waxa muhiimka ah: shaqadiisa. Horay ayaad uga ballansan kartaa bogga Nomad waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta hoose.
Saldhigga cusub ee Nomad wuxuu ka dhashay iskaashiga ay la leeyihiin Aíra, abuuraha FreePower, tikniyoolajiyadda saldhiggan cusub ee Saldhigga Pro iyadoo la adeegsanayo nashqad ina xusuusinaysa in badan oo ka mid ah saldhigyadii caadiga ahaa ee Nomad kuwaasoo ahaa kuwo iib ahaa guul kadib markii la joojiyay. Saldhigga AirPower, iyadoo la adeegsanayo isla waxyaabaha aasaasiga ah (maqaar iyo aluminium), saldhiggan cusub Waxay leedahay suurtagalnimada in dib looga buuxiyo ilaa saddex aalad dusheeda oo dhan, oo leh awood 5W qalab kasta. Ma jiro wax lacag la'aan ah oo lacag la'aan ah, qiimaha lagaa rabo inaad ku bixiso habboonaanta ah inaanu ku dhicin booska aad uga tagayso iPhone-kaaga. Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa kuleylka AirPods sanduuqa cusub ee wireless-ka lagu xiro. Waxaa ku jira sanduuqa waa xeedho 27W Power Delivery USB-C si loo xoojiyo salka.
Waxaad iska diiwaan gelin kartaa websaydhka Nomad (isku xirka) loogu talagalay hayso macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qiimaha iyo taariikhda la siidaayo ee badeecada, soo saaruhuna wuxuu ballanqaaday macluumaad dheeri ah inta lagu jiro bisha Nofembar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Saldhigga Nomad Saldhigga Pro, waxa ay AirPower noqon karto oo aan waligeed ahayn